Phandeeyar Data for Journalism & Advocacy Workshops
2015 isawatershed year for data availability in Myanmar. In May, the 2014 nationwide census results were released. In addition to being the first such census since 1983, it was also one of the first comprehensive, nationwide datasets that is publicly available. The national elections taking place in November will also producealarge publicly available dataset of parties, candidates, and election results.
To help journalists and civil society organizations understand, analyze and visualize this newly available data, Phandeeyar will be hosting three week-long workshops every month starting from August before the elections, andatwo-week long workshop after the elections to analyze the resulting data. We will invite participants from independent media organizations who will learn skills to incorporate data analysis and visualization into their articles, and members of civil society organisations, who will learn to strengthen their campaigns with these data skills. Technologists, such as graphic designers, web designers, developers, database administrators, and researchers from independent media and civil society organisations will also be invited to attend the workshops.
When are the workshops going to be held?
1st Workshop: 17 – 21 AUGUST (dates confirmed)
2nd Workshop: 28 SEPTEMBER –2OCTOBER (dates confirmed)
3rd Workshop: 19 – 23 OCTOBER (dates confirmed)
Final Workshop: 16 – 27 NOVEMBER (tentative)
Attendees for each of the first3workshops will include6to9journalists,3to5members of civil society organisations, and3to5technologists. For the last, post-election workshop, the best participants from the first3workshops will be invited to participate again foramore in-depth two-week training.
The overview of curriculum for the workshops is as follows:
– Intro to data journalism and data driven campaigns
– Searching for data online
– Writingadata-driven story: Participants will start working on an article or campaign that involves data analysis
– Preparing datasets for visualization in Excel
– Making charts and graphs using applications such as Infogr.am and Tableau
– Avoiding common mistakes when using data
– Creating maps using applications such as CartoDB and Google Fusion Tables
– Work on individual data-driven article/campaign
The lead trainer for the workshops is Eva Constantaras, who has extensive experience running data journalism trainings in various countries including Kenya, Palestine, Sri Lanka, China and Afghanistan.
Eva has run data journalism activities for USAID, the World Bank, Hivos and Google. Her reporting has appeared in media outlets including the Seattle Times, El Mundo and El Confidencial. She also contributes to journalism blogs such as PBS Mediashift, the American Journalism Review, the Open Knowledge Foundation and Knight-Mozilla OpenNews Source.
ဖန်တီးရာမှ သတင်းထောက်များ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နည်းပညာသမားများအား data journalism၊ advocacy data နှင့် visualization skill များ သင်ကြားနိုင်မည့် “Data for Journalism and Advocacy workshop” များကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အချက်အလက်များကို ရယူနိုင်မှုအတွက် မှတ်ကျောက်တင်ရမည့် နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ မေလတွင် ၂၀၁၄ခုနှစ် တစ်တိုင်းပြည်လုံး၏ သန်းကောင်စာရင်းအချက်အလက်များ ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုအချက်အလက်များသည် ၁၉၈၃ နောက်ပိုင်း ထွက်လာခဲ့သည့် ပထမဆုံးသော သန်းကောင်စာရင်းအချက်အလက်များဖြစ်၍၊ ပြည့်စုံသည့် အချက်အလက်များ ပါပြီး လူတိုင်း ရ ယူအသုံးပြုနိုင်သည့် ပထမဆုံးသော တစ်တိုင်းပြည်လုံး၏ အချက်အလက်များလည်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲမှလည်း လူတိုင်း ရယူအသုံးပြုနိုင်မည့် ပါတီများ၊ အမတ်လောင်းများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ၏ အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ အချက်အလက်များကို သတင်းထောက်များနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ နားလည်နိုင်ခြင်း၊ စမ်းစစ်နိုင်ခြင်းနှင့် visualize လုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကို ကူညီရန် ဖန်တီးရာမှ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တွင် တစ်ပတ်တာသင်တန်းများကို သြဂုတ်လမှ စ၍ သုံးလတိတိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲပြီးသည့်အခါတွင် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကို စမ်းစစ်ရန်အတွက် နှစ်ပတ်တာအလုပ်ရုံသင်တန်းများကို ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းဆောင်းပါးများတွင် အချက်အလက်စိစစ်ချက်များနှင့် visualization ကို ပေါင်းစပ်နိုင်မည့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို သင်ယူရမည့် ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းနှင့် အဆိုပါအချက်အလက်ကျွမ်းကျင်မှုများဖြင့် မိမိတို့၏ လှုပ်ရှားမှု (ကန်ပိန်း)များကို ခိုင်ခိုင်မာမာပြုလုပ်နိုင်ရန် သင်ယူရမည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို သင်တန်းအား တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်းနာများ၊ ဝဘ် ဒီဇိုင်နာများ၊ developerများ၊ database administrator များနှင့် သုတေသီများကိုလည်း သင်တန်း တက်ရောက်ရန်အတွက် ဖိတ်ကြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းများကို ဘယ်အချိန်တွင် လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါသလဲ?
ပထမအကြိမ် သင်တန်း – ၁၇ မှ၂၁ သြဂုတ် (အတည်ပြုပြီး ရက်စွဲ)
ဒုတိယအကြိမ် သင်တန်း –၂၈ စက်တက်ဘာ မှ ၂ အောက်တိုဘာ (အတည်ပြုပြီး ရက်စွဲ)
တတိယအကြိမ် သင်တန်း – ၁၉ မှ ၂၃ အောက်တိုဘာ (အတည်ပြုပြီး ရက်စွဲ)
နောက်ဆုံး သင်တန်း – ၁၆ မှ ၂၇ အောက်တိုဘာ (လျာထားသည့် ရက်စွဲ)
ပထမ သင်တန်း ၃ခုတွင် သတင်းထောက် ၆ ယောက်မှ ၉ ယောက်အထိ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့ဝင်များ ၃ ယောက်မှ ၅ ယောက်အထိနှင့် နည်းပညာသမားများ ၃ ယောက်မှ ၅ ယောက်အထိ တက်ရောက်မည့်သူများကို လက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်လုပ်မည့် နောက်ဆုံးသင်တန်းတွင် အဆိုပါ သင်တန်း ၃ခုမှ အတော်ဆုံးသင်တန်းသားများကို ရွေးချယ်၍ ဖိတ်ခေါ်ပြီး ၂ပတ်ကြာ သင်တန်းကို ဆက်လုပ်သွားပါမည်။
သင်တန်းတွင် သင်ကြားရမည့် အရာများ
သင်တန်းများ၏ သင်တန်းရိုးညွှန်းများမှာ အခြေခံအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းကို Eva Constantaras မှ ဦးဆောင်သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပြီး သူသည် ကင်ညာ၊ ပါလက်စတိုင်း၊ သီရိလင်္ကာ၊ တရုတ်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်စသည့် နိုင်ငံများတွင် data journalism သင်တန်းများကို ပေးခဲ့ပြီး အတွေ့အကြုံအလွန်ရှိသူဖြစ်ပါသည်။
Eva သည် data journalism ပွဲများကို USAID၊ World Bank၊ Hivos နှင့် Google တွင်လည်း လုပ်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏ အစီရင်ခံစာများသည် the Seattle Times၊ El Mundo နှင့် El Confidencial စသည့် သတင်းနယ်ပယ်များတွင်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ She also contributes to journalism blogs PBS Mediashift၊ the American Journalism Review၊ the Open Knowledge Foundation နှင့် Knight-Mozilla OpenNews Source စသည့် သတင်းစာပညာ ဘလော့ဂ်များတွင်လည်း ပါဝင်ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။